Zvapupu zvaJehovha Zvinobatsira Vanenge Vawirwa Nenjodzi Here? | Mibvunzo Inonyanya Kubvunzwa
SARUDZA MUTAURO Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Armenian (West) Assamese Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Bashkir Basque Bassa (Cameroon) Batak (Toba) Bengali Bislama Bosnian Boulou Bulgarian Cakchiquel (Western) Cambodian Catalan Cebuano ChiKaren (S'gaw) ChiSutu (Lesotho) ChiTetun Dili Chichewa Chin (Hakha) Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chirungu Chitonga Chitonga (Malawi) Chitumbuka Chol Chuvash Cibemba Croatian Czech Dangme Danish Digor Dutch Efik Estonian Ewe Fante Faroese Fijian Finnish French Ga Galician Garifuna Georgian German Greek Greenlandic Guarani Gujarati Gun Haitian Creole Hausa Hebrew Hiligaynon Hindi Hungarian Icelandic Igbo Iloko Indonesian Isoko Italian Japanese Javanese Kabiye Kabyle Kachin Kannada Kazakh Kikamba Kikaonde Kikongo Kikuyu Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Kisi Kisonge Kongo Korean Krio Kwangali Kwanyama Kyangonde Lamba Latvian Lingala Lithuanian Low German Macedonian Malagasy Malay Malayalam Maltese Mam Mambwe-Lungu Mapudungun Marathi Mazatec (Huautla) Mende Mixe (North Central) Moore Mutauro Wemasaini wokuAmerica Myanmar Nahuatl (Central) Nahuatl (Guerrero) Nahuatl (Huasteca) Nahuatl (Northern Puebla) Ndebele Ndebele (Zimbabwe) Ndonga Nepali Ngabere Ngangela Nias Norwegian Nzema Oromo Ossetian Otomi (Mezquital Valley) Pangasinan Papiamento (Aruba) Papiamento (Curaçao) Persian Polish Portuguese Punjabi Quechua (Ayacucho) Quechua (Bolivia) Quechua (Cuzco) Rarotongan Romanian Russian Samoan Sepedi Serbian Serbian (Roman) Setswana Shona Silozi Sinhala Slovak Slovenian Soli Solomon Islands Pidgin Spanish Sunda Swahili Swati Swedish Tagalog Tahitian Tamil Tankarana Tarascan Tatar Telugu Thai Tigrinya Tlapanec Tojolabal Tok Pisin Tongan Totonac Tsonga Turkish Turkmen Twi Tzeltal Tzotzil Uighur (Cyrillic) Ukrainian Urdu Uzbek Valencian Venda Vezo Vietnamese Wallisian Welsh Xhosa Yoruba Zapotec (Isthmus) Zapotec (Lachiguiri) Zulu
Audio Nzira dzokudhaunirodha zvakarekodhwa Zvapupu zvaJehovha Zvinobatsira Vanenge Vawirwa Nenjodzi Here?
Hongu, Zvapupu zvaJehovha zvinogara zvichibatsira vanhu vanenge vawirwa nenjodzi. Tinobatsira vanhu vose kunyange vasiri Zvapupu, kuenderana nomurayiro weBhaibheri uri pana VaGaratiya 6:10 wokuti: “Ngatiitirei vose zvakanaka, asi kunyanya vaya vane ukama nesu mukutenda.” Panguva yedambudziko vanhu vanenge vachida kubatsirwa saka tinovanyaradza uye tinovasimbisa pakunamata.—2 VaKorinde 1:3, 4.
Kana pakaitika njodzi, vakuru veungano dzinenge dzawirwa nenjodzi vanotaura nevose vavanonamata navo vari munzvimbo yaitika njodzi kuti vanzwe kana vari panzvimbo yakachengeteka uye kuti vangada rubatsiro rwakaita sei. Zvadaro vakuru vanobva vaudza hofisi yebazi yeZvapupu zvaJehovha iri pedyo navo pamusoro pezvavanenge vaona pakuongorora kwavo uye rubatsiro rwavapa.
Kana pachidiwa rubatsiro rwunopfuura rwunogona kupiwa neungano dziri munyika iyoyo, Dare Rinotungamirira reZvapupu zvaJehovha rinoronga kuti pave nezvinhu zviri kudiwa. Izvi zvakafanana nezvaiitwa nevaKristu vepakutanga-tanga pavaibatsirana panguva yenzara. (1 VaKorinde 16:1-4) Hofisi yebazi yemunyika yaitika njodzi inosarudza vanozoshanda muMatare Okuyamura Vanenge Vawirwa Nenjodzi kuti varonge uye vatungamirire pakubatsira vanenge vawirwa nenjodzi. Zvapupu zvinenge zvichibva kune dzimwe nzvimbo zvinoshandisa mari dzazvo nezvimwe zvinhu zvavo kuti vazobatsira.—Zvirevo 17:17.
Imwe nzira inoshandiswa mari yezvipo inoendeswa kumahofisi emapazi eZvapupu zvaJehovha ndeyekuyamura vanenge vawirwa nenjodzi. (Mabasa 11:27-30; 2 VaKorinde 8:13-15) Sezvo vanhu vanozvipira kuita basa iri vasingabhadharwi, mari inoshandiswa inenge iri yokubatsira vanhu vanenge vawirwa nenjodzi. Tinoita zvose zvatinogona kuti mari iyi yezvipo inyatsoshandiswa zvakakodzera.—2 VaKorinde 8:20.
Munyika dzakawanda, Zvapupu zvaJehovha zvinoyamura vanhu vanenge vawirwa nenjodzi.